Imigaqo - Yenza.id
Uxwebhu olulandelayo lubonisa imigaqo yokusetyenziswa kwewebhusayithi ye-MAKE.ID. Ngaphambi kokusebenzisa nayiphi na inkonzo ye-MAKEID, kufuneka ufunde, uqonde, kwaye uyavumelana nale migomo. Ikholamu ngakwesokudla inikeza inkcazelo emfutshane yemigqaliselo yokusetyenziswa kwaye ayibophe ngokomthetho.
1. Imiqathango jikelele
(1) Bobabini, abasebenzisi bokuphela kunye nabaxumi bezentengiso, bathathwa njengabaxhasi ngemimiselo nemibandela.
(2) Le migaqo neemeko ziya kufaka isicelo sobume bonke bezoshishino phakathi komxhasi kunye ne-www.make.id. Zisebenza kubanini bebhishini kuzo zonke iimeko zobudlelwane bezolimo, nangona kungavunyelwanga ngokuvakalayo kwakhona; inguqu ngexesha lekhontrakthi lisebenza kwaye liyasebenza.
NGEZIKOLO, La magama aya kulawula zonke izenzo zeenkonzo zethu apha.
(1) Iimveliso ezinikezelweyo ziyimifanekiso eqingqiweyo kunye neprinta "amakhadi" okwenene isampula, okanye intsha engasetyenziswanga ekuhanjisweni koluntu. Abanalo isimo seburhulumenteni kwaye akukho maxwebhu aseburhulumenteni. Akwawutshintshisi nawaphi na amalungelo okanye amalungelo kumnini. Amakhadi ngokwawo ayabonakali njengobungqina bohlobo oluthile.
(I-2) Amakhadi awasemthethweni, kwaye aqondwa njengeikopi / iimpazamo, okanye ezenzelwe nayiphi na into okanye iimvavanyo zeenkqubo njengoko kwenzeka kwikhadi elisemthethweni, elisemthethweni.
(3) Ukusetyenziswa kakubi kweli khadi akungekho mthethweni, kungakhathaliseki ukuba ngaba ngumphumo wokungahambelani kakuhle, ubuqhetseba, ukusetyenziswa kakubi koluntu okanye kwezinye. Ukuba uthatha isigqibo sokwenza into engaphezulu kweenjongo zokuqala zokuthengwa kwamakhadi alungileyo, kufuneka uthathe ulwazi ukuba unokulimaza umThetho.
NGEZIKOLO, Sineemveliso ezinkulu, nangona zingenalo igosa esemthethweni.
3. Imisebenzi yabathengi
(1) I-MAKE.ID ayikho nayiphi na inyanzelekile nayiphi na enye (ngokuthe ngqo, ngokungathanga ngqo, ngokukodwa, ekhethekileyo, efanelekileyo), ukulahleka okanye ukulimala okubangelwa ukusetyenziswa kwala makhadi. Xa ungathandabuzeki, umthengi ukhulula yonke imonakalo kunye namatyala esithathu.
(2) Ngulo xanduva lomxhasi ukuqinisekisa ukuba ifa kunye nokusetyenziswa kwezi templates zamakhadi ezenziwe ngaphambili zivunyelwe kwindawo efunwayo ngaphambi kokuthenga ikhadi kunye nathi. Xa kuthengwa kwamakhadi ethu akwenziwe kuqala umthengi uqinisekisa ukuba ilifa leli khadi livumelekile kwilizwe elifanelekileyo, ishishini okanye intlangano.
(3) Ukubhengezwa kolwazi lobuxoki, ulwazi olunenkohliso lungabi mthethweni. Okokuqala, oko kuthetha ukuthini, ukusetyenziswa kwamakhadi e-MAKE.ID njengobungqina beminyaka okanye ubuninzi bezinga (nokuba nolwazi lobuxoki) nangayiphi na injongo engekho mthethweni.
NGEZIKOLO, Kufuneka uqiniseke kwindawo okanye kwintlangano ukuba ezi ziboniso ezenziwe ngaphambili zingasetyenziswa.
4. Ukupheliswa kweKontrakthi
(1) Imveliso kunye neenkonzo ezidweliswe ngaphakathi kwile venkile ye-intanethi aziyizibonelelo ezibophelelayo; kunokuba sisimemo kumthengi ngokuthumela isipho esibophelelayo kwi-MAKEID ngokubeka umyalelo.
(2) Ngokuthumela idatha yedatha ekupheleni komyalelo wokuba umyalelo umthengi ubeka umyalelo wokubopha izinto ngaphakathi kwinqwelo yokuthenga ye-intanethi www.make.id iya kuqinisekisa ukuba ifumene umyalelo ngokukhawuleza. Okuqinisekisiweyo kokufumana akubanga ukwamkelwa komyalelo; nangona kunjalo ingaqhagamshelaniswa nesibhengezo sokwamkela.
(3) www.make.id unelungelo lokufumana isibonelelo semvumelwano (umyalelo) womthengi kwisithuba seentsuku ezisixhenxe zokusebenza emva kokufumana. Ukwamukelwa kunokubhengezwa okanye ngoqhagamshelwano olucacileyo okanye ukuhanjiswa kweempahla.
(4) www.make.id inelungelo lokunciphisa umyalelo kwintlawulo yasemakhaya. Ukongezelela, utshintsho olunokwenzeka, olunjengomxholo, ifom okanye umbala - kwinqanaba elifanelekileyo kumthengi - ligcinwe.
(5) Inkontileka yokugqibela ixhomekeke ekuhambisweni okungenanto okanye okuyingxenye, kwimeko yokungabikho okungafanelekanga okanye okungafanelekanga ngababoneleli - oko kukuthi, www.make.id ayicingi nengozi. Uxanduva lweenjongo kunye nokunganakwa ngokuhambelana ne-§ 9 yale Migqaliselo neMibandela iya kuhlala ingakhuselekanga. Xa kwenzeka ukungabikho okanye ukutholakala okukodwa kwamasevisi kwi-www.make.id iya kwazisa umthengi ngokukhawuleza; xa kwenzeka ukurhoxiswa ngumthengi, i-already made payment iya kubuyiselwa ngokukhawuleza, ukuba inkonzo ayizange iqalwe okwamanje.
NGEZIKOLO, Ubeka umyalelo oqinileyo. Awunakubuyiselwa imali xa ikhadi lakho lenziwe.
(1) Ngokubanzi, abathengi banelungelo lokuba netyala lokurhoxisa izinto ezithengiweyo. Kwimeko yangoku, nangona kunjalo, ngokuhambelana ne- § 312 d para. I-4 BGB (I-Code Civil yaseJamani) inelungelo lokurhoxisa alisebenzisi, kuba phantsi kwekhontrakthi ngokuphathelele ukuhanjiswa kweempahla eziveliswa ngokweenkcukacha zabathengi kwaye ngokucacileyo zilungelelaniswa neemfuno zomntu.
NGEZIKOLO, Awukwazi ukurhoxisa i-oda elandisiweyo ngenxa yokuba asikwazi ukuthengisela ikhadi elilungisiweyo.
6. Amanani kunye nokuthumela
(1) Zonke iintengo ezifakwe kwivenkile ye-intanethi zixabiso lamanani. Sele sele zibandakanya onke amanqaku exabiso, ngakumbi irhafu yokuthengisa.
(2) Ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela, amanani awabandakanyi ukupakishwa, imithwalo, ukuposa okanye i-inshorensi. Ngoko ke, ukuthunyelwa kweemveliso eziyalelwe kukho kunokufumana iindleko zokuthumela ezongezelelweyo; Abaxumi baya kukwaziswa ngokucacileyo ngemali.
NGEZIKOLO, Akukho zindleko ezifihlakeleyo kwaye uza kubona zonke ixabiso lokugqibela ngaphambi kokubeka umyalelo.
7. Policy Shipping
(1) Ngaphandle kokuba ikhefu livunyelwene ngokucacileyo, iimpahla ziza kuhanjiswa kuphela emva kwentlawulo ephezulu-oko kukuthi, ukuhanjiswa kuya kwenziwa kuphela emva kokuhlawulwa kwentlawulo.
(2) Ukukhutshwa ngokukhethekileyo kuyavunyelwa ukuba kunengqiqo kumthengi.
(3) Amashishini apho angabakho umngcipheko wokulahlekelwa ngengozi okanye ukungonakali kwezinto ezidayisiweyo ngokudluliselwa kuye ngokwakhe okanye umntu ogunyazisiweyo ukuba awusifumane, kwi-imeyili yokuthenga umngcipheko unokuba kunye nokuhanjiswa iimpahla kumntu ofanelekileyo wokuthutha. Kubathengi, umngcipheko wokulahlekelwa ngengozi kunye nokuphazamiseka ngengozi kweentengiso kubakho ukunikezelwa kweempahla kumthengi, kungakhathaliseki ukuba umthengi akakwazi ukumkelwa.
NGEZIKOLO, Sithumela zonke iimveliso emva kokufumana intlawulo.
(1) Kwimeko yokuhlawulwa ngotshintsho lwebhanki okanye ukuhlawulwa kwemali, kuyimfuneko ukungenisa igama elipheleleyo kunye nenjongo / inombolo yenombolo kwi-akhawunti yasebhanki ekwazisiweyo.
(2) Umthengi uya kuba nelungelo lokucima, ukuba ukuchaswa kwakhe okusemthethweni kuye kwasungulwa ngokomthetho okanye kwamkelwa ngu-www.make.id. Umxhasi unokwenza kuphela amalungelo akhe okugcina ukuba i-counterlaimer isekelwe kwikontrakthi enye.
NGEZIKOLO, Ukunika intlawulo yefowuni yakho yentlawulo ngokufanelekileyo, kufuneka uhambise inombolo yakho ye-oda.
9. Ukugcinwa kweSihloko
(1) Kubathengi, i-www.make.id igcina ubunini beempahla ezithengisiwe (iimpahla ezinemiqathango) kuze kube yintlawulo epheleleyo yentlawulo eyenziweyo. Kwimashishini, www.make.id ukugxininisa ngokuhlawulwa ngokupheleleyo kwezibango ezivela kulwalamano oluqhubekayo lwezoshishino.
(2) Umxhasi unyanzelekile ukuba aphathe impahla ngokucophelela ngexesha lokugcinwa kwesihloko.
(3) Ngethuba lokugcina ityala umthengi unyanzelekile ukuba avumele ukufikelela komntu wesithathu kwimpahla kuye kumthengisi-umzekelo xa kwenzeka ukuthunjwa-kwaye uxelele umthengisi ngomonakalo okanye ukutshatyalaliswa kwempahla nokubonelela ngolwazi lonke kunye namaxwebhu afunekayo ukukhusela amalungelo omnini. Amagosa okunyanzeliswa okanye abathathu maqela mabaxelelwe ngobunikazi belizwe langaphandle. Umthengi kufuneka azise malunga nokutshintsha kobunini beempahla kwakunye nokutshintsha kokuhlala.
(4) Ngokwephulo-melwano ngumthengi-ngokukodwa ukungahlawulwanga okanye xa kwenzeka ukuphulwa komsebenzi phantsi kwesigatshana (2) kunye (3) sale ngcebiso - www.make.id inelungelo lokukhansela isivumelwano kunye ukubuyisela iimpahla.
NGEZIKOLO, Xa kukho imali engaphumeleli, sinokubuyisela izinto ezibuyiselwe.
10. IWarranty kunye neMqinisekiso
(1) Imbonakalo nje yemveliso nganye kwiwebhusayithi ibonwe njengenkcazo yenkonzo ecocekileyo kwaye akukho nhlobo njengesiqinisekiso somgangatho weemveliso. Ingxelo yeWarranty yamalungu omntu wesithathu, afana neenqinisekiso zemveliso, ayinakuchaphazeleka.
(2) Ngokuhambelana nemimiselo esemthethweni, umthengi unokufuna nje ukuzaliseka ngokulandelelweyo ukuba iimpahla ezithunyelweyo ziyilo. Umthengi unokukhetha ukuba ngaba ukuzaliseka okulandelayo kuya kwenziwa ngokulungiswa okanye ukutshintshwa. Nangona kunjalo, i-www.make.id ihlala inelungelo lokunqanda uhlobo lokuzaliseka xa liza neendleko ezingafaniyo ngelixa olunye uhlobo lwesilungiso lungekho naziphi na izinto ezingalunganga kumthengi.
(3) Umthengi akavumelekanga ukuba asuse ngokukhawuleza ukusilela kwamanje okanye ukuba asuswe ngumntu wesithathu (ukuzimela); iindleko ezenzekayo aziyi kubuyiselwa.
(4) Ukuba umsebenzi olandelayo ungaphumeleli, umthengi unakho, ngokwengqiqo yakhe ngokwemimiselo yomthetho, ukunciphisa umvuzo (ukunciphisa), ukukhansela inkontileka (ukuhoxiswa), ukufunwa kwembuyekezo okanye ukufumana iindleko ezifunyenwe. Ukuba umthengi ufuna ukuhlawulwa kweendleko zokungahlawuliswa kweendleko, iimingcipheko zemfanelo zeCandelo 9 yale Migqaliselo neMeko ziya kusebenza.
(5) Ixesha lokukhawulelwa kwamalungelo omthengi ngenxa yeempembelelo zeempahla ezithengiweyo ziyiminyaka emibini ukusuka ekunikezweni kwempahla yabathengi kunye namashishini omnye kunyaka ukususela ngomhla wokuhanjiswa. Ukunciphisa ukulungelelaniswa kwezi zihlandlo akusebenzi ngaphandle kokuba i-www.make.id ihlawulwe phantsi kwecandelo 9 yale Migqaliselo okanye ibhekisela kunene ilungelo langempela lomntu wesithathu, ngenxa yokunikezelwa kwento enikezelwayo.
NGEZIKOLO, Ukuba mhlawumbi sithumele into engaphumelekanga, siyakutshintsha. Kodwa kungekhona xa uzilimaza wena.
(1) Ngenxa yeemfuno zomthetho www.make.id ihlawuliswe ngokupheleleyo ngokumalunga nokulimala ebomini, isilungu okanye impilo esekelwe ukuphulwa komsebenzi, okanye abameli bayo kunye nabanomnye umonakalo, ngokusekelwe ukuphulwa ngokwemfuno okanye ngokunyanisekileyo komsebenzi kunye nenjongo yobuqhetseba ngayo, abameli balo okanye abameli. Ngaphezu koko, i-www.make.id ihlawuliswe ngokupheleleyo ngemonakalo ehlanganiswe yimbopheleleko ngokubhekiselele kumalungiselelo omthetho okubophayo, njengomthetho we-German Product Liability Act.
(2) www.make.id inesibophezelo somonakalo obangelwa ukunyaniseka okulula, ngokungakhathaliseki ukuba ukunganakwa kubandakanyeka ukuphulwa kwemigaqo-mboleko, apho ukuzaliseka kwenkontileka kubaluleke kakhulu (izibophelelo zekhadi); ngelixa u-xanduva lukhawulelwe kwizinto ezibonakalayo, eziqhelekileyo, umonakalo othe ngqo.
(3) Xa kwenzeka ukuphulwa kancinci kwamanyathelo amancinci ekontraki www.make.id akayi kuba noxanduva kumashishini; kubathengi, uxanduva kula maxesha lucaciswe kwizinto ezibonakalayo, eziqhelekileyo, umonakalo othe ngqo.
(4) Naliphina uxanduva olongezelelweyo - kungakhathaliseki ukuba ngumthetho wesibango esithathiweyo - ayifakiwe.
NGEZIKOLO, Asinakuhlawulwa nantoni na enayenzayo ngemveliso yethu.
12. Imiqathango yokugqibela
(1) Umthetho weRiphabhlikhi yaseJamani isebenza. Kubathengi abangagqiba isivumelwano kunye neenjongo zengcali okanye ezoshishino, olu khetho lomthetho lusebenza kuphela ngaphandle kokuba ukhuseleko olunikezelweyo alukhatyathwa yimimiselo enyanzelekileyo yomthetho welizwe apho umthengi enokuhlala khona.
(2) Amalungiselelo eSivumelwano seZizwe eziManyeneyo kwiZivumelwano zokuThengiswa kweeMpahla zamazwe ngamazwe (I-CISG) ayiyi kusebenza.
(3) Ukuba nayiphi na imimiselo yesivumelwano kunye nomthengi, kubandakanywa le migaqo kunye nemimiselo, ingabikho mthethweni okanye ayikho emthethweni okanye ukuba izivumelwano ziqulethe ikhefu, oku akukuchaphazela ukuqinisekiswa kwemigaqo eseleyo. Kwiimeko ezinjalo amaqela azimisela ukutshintshwa ngokubonelela ngokupheleleyo okanye okungekho ngempumelelo ngokubonelela ngempumelelo, ekuphumeleleni koqoqosho lwaso kufutshane nelelo elingenakusebenza.
(4) Indawo yokulawula kuyo yonke ingxabano evela kwesi sivumelwano iHurgand.
NGEZIKOLO, Nayiphi na imicimbi yomthetho ingasetyenziswa ngokusekelwe kumthetho waseJamani.
Le Migangatho yeNkonzo isebenza ngo-Agasti 01, 2017.
Yenza i-ID yi-#1 esemthethweni, i-legit, iwebhusayithi ye-ID yebhanki ethembekileyo ngabanye, amabhizinisi nemibutho kwihlabathi jikelele.
Singumthombo owodwa wenombolo yamakhadi okuchonga amakhwalithi kunye ne-ID yesidima, njengekhadi lokushicilela, ikhadi le-ID yomsebenzi, ukuhamba emva kwe-hologram, amakhadi omfundi kwiiyunivesithi, ilayisenisi yokuqhuba oorhulumente eJamani, eYurophu, e-USA, e-UK, e-Asia kunye ehlabathini lonke! Kwishishini ukususela ngo-2007, sihlala sisisiseko esithembekileyo se-ID yesithombe se-ID, ilayisenisi yokuqhuba, amakhadi e-id umfundi, amakhadi okushicilela, ukupasa kwe-backstage, i-ID yomqeshwa kunye namakhadi e-ipidenti ye-plastiki kunye neebheji ze-photo kwi-intanethi. Ungathengisa ukwenza i-id yakho kwi-intanethi kwaye ufunde ukusuka kwi-1,500 yokwenza i-id yokuhlola i-id. Zonke iimviwo zabaxhasi kunye neengqinisiso zizimeleyo ngokwenza idilesi yokuthenga yezithemba. Sithumela wonke amakhadi ethu okuchonga okanye enze amakhadi e-HLgramgram kwi-imvulophu enomlinganiselo kuyo nayiphi na indawo oyithandayo. Uza kufumana ikhadi lakho le-id yesitudiyo eliqhelekileyo linikezwa ngokukhawuleza kunokuba kwenye indawo. Kungakhathaliseki ukuba usetyenziso olulodwa / oluzimeleyo njengeprojekthi yefilimu (umz. I-YouTube blogger, umvelisi we-movie, njl.) Okanye kwicandelo lezoshishino, zonke iiflathi ze-id ezenzelwe ukuba zenziwe kwaye ziveliswe kumgangatho ophezulu. Ukuthelekiswa nakwezinye iisayithi ukuyila, umgangatho, inkxaso yabathengi kunye nenkonzo yokuthumela ayinakulinganiswa, ingabonakali kwaye ayikhunjulwa. Ukuba ubuzibuza ukuba ungenza njani i-ID okanye ibheji kwi-intanethi okanye apho ufumana khona i-ID njengento elula kunokwenzeka, uze ufike kwindawo efanelekileyo! Unokuthembela kuthi kwaye uya kufumana oko uhlawuleyo-ikhwalithi ephezulu yokwenza ikhadi le-ID. Asiboneli naliphi na into enqatshelwe njengeempendulo ezikhoyo, ezine-copyright Umenzi wezazisi zombuso, ukwenza ikhadi le-id kwi-intanethi, umenzi wekhadi lomenzi we-intanethi, umenzi wekhadi, Ikhadi lesaziso, umenzi webheji, umenzi we-id, ilayisenisi yokubuyisela, i-id yomtshini, umenzi wekhadi ye-id, umdali we-id, indlela yokufumana id, i-generator ye-id, ikhadi lesikhangiso sezithombe, id idla, indlela yokwenza id, umenzi wekhadi lokuchonga, amakhadi azisiweyo, yenza ikhadi lakho le-id. Naluphina uphando malunga nokuthengwa kwe / ukuthenga idijithi ye-id ekhompyutheni kwi-intanethi iya kulahlwa ngabasebenzi bethu. Hlola ukwenza iimvavanyo ze-id kunye nokuthenga amakhadi wakho wesithombe kunye ne-ID ye-hologram ngoku. Imibuzo yebhanki yebhanki (i-ID yomqeshwa, amakhadi obulungu, njl.), Nceda uqhagamshelane nenkxaso yethu kumxhasi.
© 2020, Yenza.id | Studio Design Studio | iibheji | Cards Fun